श्रीलंका विस्फोटका आक्रमणकारी सबै फेला परे त ? अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्ख-तरा कायमै छ
श्रीलंका विस्फोटका आक्रमणकारी सबै फेला परे त ? अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्ख-तरा कायमै छ - Nepal Talk
कोलम्बो । गएको महिना श्रीलंकामा भएको आत्मघाती आक्रमणमा २५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। सो हमलामा स्थानीय मुसलमान समुदायको हात रहेको हुन सक्ने चर्चाले श्रीलंकाका सर्वसाधारण नागरिकलाई ठूलो झट्का महसुस भएको थियो।
र, सवाल पनि उठेको थियो सामान्य समूहले यति ठूलो घटना गराउँदा पनि किन पहिला नै केही पनि जानकारी हुन सकेन ? यसमा जोडिएको सुराक जनवरीको मध्यमा त्यतिबेला मिलेको थियो जतिबेला श्रीलंकाको प्रहरीले देशको पश्चिमी तटमा रहेको पुट्टलम जिल्लास्थित विलपट्ट नेशनल पार्कको छेउमा एउटा नरिवलको बगैंचामा १०० किलो विस्फोटक पदार्थ र १०० वटा डेटोनेटर बरामद गरेको थियो।
त्यसबेला प्रहरी इश्लामिक कट्टरपन्थीद्वारा बुद्धको मूर्तिमा भएको आक्रमणको जाँचमा जुटेको थियो। त्यतिबेला प्रहरीले नवगठित कट्टरपन्थी मुश्लिम समूहका चार जनालाई गिरफ्तार गरेको थियो। यसको तीन महिनापछि संदिग्ध इश्लामिक कट्टरपन्थीले कोलम्बो, नेगोंबो र पूर्वी सहर बट्टिकलोवामा ४० विदेशीसमेत २५० जनाको निर्मम हत्या गर्नका लागि आफूलाई प्रयोग गरेका थिए।
यद्यपि नरिवलको बगैंचामा मिलेको विस्फोटक पदार्थको घटना एउटा मात्रै थिएन। यो, त्यो दिन भएका कैयौं घटना मध्येको एउटा मात्रै थियो। यसबाट खतराको घण्टी बज्नु पर्थ्यो। त्यतिबेला श्रीलंकाका सुरक्षा अधिकारीहरुलाई सिरियामा इश्लामिक स्टेटमा सामेल भएका व्यक्तिहरु पनि घर फर्केको सूचना आएको थियो। तर, त्यसमा त्यति धेरै विचार पुर्याइएन।
अर्को कुरा इस्टरको अवसरमा भएको त्यो हमला छिमेकी भारत र अमेरिकाले बारम्बार दिएको खुफिया सूचना पछि भएका थिए। पछिल्ला विस्फोटका घटनापछि प्रहरीले पुट्टलममा जनवरी महिनामा भएको गिरफ्तारी र अहिले ठूलो संख्यामा हताहतीको घटना गराउने मास्टरमाइन्डलाई जोडेर अनुसन्धान शुरु गरेको छ।
सन्तोष लिँदाको परिणाम !
श्रीलंका सरकारमा उच्चस्तरमा राजनीतिक अन्तरद्वन्द्व र गुटबन्दी अहिले चलिरहेको छ। दिइएको सूचनालाई देखेको नदेखेकै गरेका कारण यो घटना भएको विषय अहिले जगजाहेर भइ सकेको छ। यद्यपि २००९ मा गृहयुद्ध समाप्त भएपछि लिन थालिएको आत्म सन्तोषले गर्दा पनि यो घटना हुन पुगेको भन्न थालिएको छ।
तमिल अल्पसंख्यक पृथकतावादी र सरकारबीच युद्धको समाप्ती भएपछि मुश्लिम विरोधी छिटपुट दंगाले असन्तोष पैदा गरेको थियो। तर यति ठूलो मात्रामा क्षति पुग्नेगरी घटना होला भन्ने संकेत थिएन। श्रीलंकामा इस्टर सन्डेको दिन भएको सो हमलामा आफ्नो नजर लगाउने आतंकवादविरोधी टिमका सदस्य भन्छन्, “इश्लामिक कट्टरपन्थीले गराएको यो विस्फोटले सबै हैरान हुनु पर्ने अवस्था किन हो भने उनीहरुले आफ्नो पुरै अपरेशनलाई गोप्य पनि राखे।
यसका लागि विस्तृत योजना, सुरक्षित घर, प्लानर्स र ह्याण्डलर्सको एउटा व्यापक नेटवर्क, बम बनाउनमा विशेषज्ञता र पैसाको पनि जरुरत पर्दछ। तर, यी सबै काम गरेर पनि उनीहरु बच्न सके। यसमा केही प्रश्नको जवाफ प्राप्त भएको छ। तथापि, सुरक्षा एजेन्सी, सरकारी अधिकारी र स्थानीय मुश्लिम नेतासँग जोडिएका सूत्रहरुले कसरी वर्षौंदेखि कट्टरपन्थी इश्लामिक स्टेटलाई सहानुभूति राख्नेहरुले सुरक्षा बलको नाकैमुनि समूह खडा गरेका थिए भन्ने अचम्म लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
जाँचकर्ताहरुको भनाइ छ कि केही परिवारका व्यक्तिहरु कट्टरपन्थी बनेर यस्ता गुटको सञ्चालन गर्न लागेका थिए। जाँचको संवेदनशीलताका कारण आफ्नो पहिचान गोप्य राख्न अनुरोध गर्ने आतंकवाद विरोधी एजेन्टको भनाइ छ, ‘‘यसप्रकारले उनीहरुले आफ्ना गतिविधिहरु आफैंमा मात्रै सीमित राख्न सफलता प्राप्त गर्दै आएका थिए।
प्रत्येक इकाइले ठूलो नेटवर्क निर्माण गरेर अन्य कट्टरपन्थी पारिवारिक समूहको साथ सम्पर्क गर्दै आएका थिए। अहिले यो खुलासा भएको छ कि उनीहरुले आफ्नो सूचना आफूहरुको नेटवर्कभित्र मात्रै सीमित गर्दै आएका थिए। सामाजिक सञ्जाल र मेसेजिङ एपका कारण सूचना तथा योजनालाई अघि बढाउन सजिलो भएको थियो।
जाँचकर्ताले अब यो पत्ता लगाउन कोशिस गरेका छन् कि यी व्यक्तिहरु कसरी आपसमा संवाद र तालमेल गर्दै आएका थिए। पूवजाँचकर्ताले भने,‘‘कट्टरपन्थीको आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि परिवारको उपयोग गर्ने एक नयाँ कुरा बाहिर आएको छ। हामीले देखेअनुसार कसरी इण्डोनेसियामा चर्च र प्रहरी भवनमा आत्मघाती हमलामा केही परिवार सामेल थिए।
कट्टरपन्थमा जोडिएको ७० जनाको अहिलेसम्म गिरफ्तार गरिएको छ। यद्यपि उनीहरुको नेटवर्क ध्वस्त भयो भन्ने कुरामा अझैपनि शंका रहेको छ। आत्मघाती आक्रमणमा कम्तिमा २५३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ५०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए।
यो हमलामा सामेल भएका मुख्य व्यक्ति र जसले बम बनाएका थिए उनीहरु अझै फरार रहेका छन्। यस कारण फेरि पनि यस्तो आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। उनी भन्छन्, ‘‘आतंकवादको परम्परागत सिद्धान्तका अनुसार एक आत्मघाती आक्रमणकारीका लागि कम्तिमा ५ जना ह्याण्डलर्सहरुको जरुरी हुन्छ। यदि यसलाई मान्ने हो भने ९ आत्मघाती हमलामा सामेल भएका ४५ जना ह्याण्डलर्स अझैपनि पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। यसका कारण पनि हामी चिन्तित छौं।
जबकि प्रधानमन्त्री रणील विक्रमासिंघेले बताएको कुरा भने ठीक उल्टो छ। हालै उनले भनेका थिए, “सिरियल आक्रमणमा जोडिएका सबै व्यक्ति कोही पक्राउ परेको र कोही मारिएका छन्। श्रीलंकामा बहुसंख्यक सिंहाली र तमिल पछि मुसलमानको संख्या रहेको छ। जसलाई पछिल्लो हमलाले निशानामा ल्याएको छ। २ दशमलब २ करोडको आवादी भएको श्रीलंकामा मुसलमानको प्रतिशत १० मात्रै रहेको छ। गृहयुद्धको समयमा मुसलमानहरुले तमिल टाइगर विद्रोहीबाट नोक्सान बेहोर्नुपरेको थियो।
सन् १९९०मा विद्रोहीले करिब ७५ हजार मुसलमानलाई श्रीलंकाको उत्तरी इलाकाबाट भगाइदिएका थिए। सोही वर्ष पूर्वमा मश्जिदमा भएको आक्रमणमा १५० जनाको मृत्यु भएको थियो। पछि सयौंको संख्यामा मुसलमान श्रीलंकाको सुरक्षा बलमा सामेल भएका थिए। खुफिया एजेन्सीमा यस्तै मानिहरुको माग भएको थियो जो धाराप्रवाह रुपमा सिंहला र तमिल भाषा बोल्न जान्दछन्। जब श्रीलंकाको सरकार तमिल विद्रोहीसँग लडिरहेको थियो त्यहीबेला पूर्वबाट रुढीबादी इश्लामिक आन्दोलनले विस्तारै खुट्टा फैलाउन थालेको थियो।
पूर्वी सहर कट्टनकुडीको मश्जिद संघका एक अधिकारी मजूक अहमद लेब्बे भन्छन्, ‘‘यो सबै तीन दशक अघि नै शुरु भएको थियो। सोही बेला इश्लामका तर्फबाट युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने काम भइ रहेको थियो। उनीहरुलाई विदेशबाट बित्तिय सहयोग पनि मिलिरहेको थियो। यो शहरको आवादी ४७ हजार छ। ती मध्ये सबैजसो मुसलमान हुन्।